कला/साहित्य Archives - पावर संदेश
राजनीति अर्थात व्यवस्था जुन समय सँगै परिवर्तन भइरहने सामाजिक विज्ञान हो । कुनै पनि व्यक्ति , परिवार , समुदाय र राष्ट्रको आवश्यकताहरुको व्यवस्थित ढंगबाट परिपुर्ति गर्दे अघि बढ्ने काम नै राजनीति हो । राजनीति नितिहरुको राजा हो थप यता
भिम बहादुर अर्यालको सत्य घटनामा आधारित “खाडी देशैमा” सार्वजनिक हुँदै
भिम बहादुर अर्यालको सत्य घटनामा आधारित लाेक गित "खाडी देशैमा" आज सार्वजनिक हुने भएकाेछ । साँझ ५ बजे वर्षा म्युजिक नामक युटिभ च्यानलबाट लाेक गित "खाडी देशैमा" बजारमा आउने भएकाे हाे । लामाे समय देखि बैदेशिक राेजगारमा रहनु भएका भिम थप यता
कन्डक्टर थिए, अचेल मान्छेहरू उनलाई ‘डाक्टरसाब’ भन्छन्
राजेश घिमिरे । झट्ट सुन्दा नौलोमात्रै होइन विचित्रैको लाग्छ- घाइते जुत्ता-चप्पलको अस्पताल।मान्छे बिरामी हुँदा उपचार गर्ने ठाउँलाई अस्पताल भनिन्छ। पशुको उपचारका लागि पनि अस्पताल सञ्चालनमा छन्। खुला आकासमुनि यस्तो थप यता
सरकार बाल दिवस मनाउन बन्द गर !
हाम्रो देशका बालबालिकाहरुको पहिलो समस्या भनेको विद्यालय जान नपाउनु हो । अझै भनौ विद्यालय जान पाए पनि विचमा नै महंगो शुल्क र गरिबीका कारण उच्च शिक्षा सम्म सामान्य परिवारका व्यक्तिहरुको पहुँच नहुनु । अहिले कोरोना महामारीको थप यता
“पुन्टे, डल्लि र पुतली”
ठाउँ उहि छ गाउँ उहि छ। कक्षा १ का पुन्टे, डल्लि र पुतली कस्ता भए होलान्? कहाँ गए होलान्? सर ले ठुलो भएसी के बन्छौं तिमारु भनेर सोध्दा पुन्टे डाक्टर बन्ने हुँ भन्थ्यो। डल्लि मास्टर बन्ने हुँ भन्थि। पुतली म सँग बिहे गर्छु भन्थि। म थप यता
प्रकाश कोइरालाकाे “दुई धार्नीको आलु” सार्वजनिक
भाद्र १,काठमाडौं। विगत लामो समय देखि कलाकारितामा सक्रिय प्रकाश कोइरालाले आफ्नो गाईजात्रा प्रस्तुती “दुई धार्नीको आलु” सार्वजनिक गरेका छन् । “पुन्टेमामा” नामक युटुब च्यानलमा अपलोड गरिएको उक्त भिडियोमा प्रकाश कोइराला आफै थप यता
विद्यार्थि जिवनको यो महत्वपुर्ण निर्णय लिने समय हो । कक्षा १० सम्मको अध्ययन पश्चातको ज्यादै संवेदनशील र जिवनभर फरक पार्ने विषय छनोट गर्ने अबधी हो । साउनको २३ गते एसइइ परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक भए सँगै अब लाखौँ थप यता
‘बा त पोइला गएछन्’
फलानो फलानो फलानो ले हल्ला चलाए मेरा बा त पोइला गएरे अनौठो नमान्नुस् न गाँउलेको पिढी बाट यो कुराले यात्रा तय गर्यो। आगन, बाटो हुँदै मेरो भत्किन लागेको घर सम्म केहि बेर मै दकुर्दै स्याँस्याँ गर्दै आइपुग्यो। मेरो भत्किन लागेको थप यता
सासको मुल्य कति ?
मुर्दा हरु बोल्दैनन्, बोल्ने सासहरु हुन। सास फेर्न भुल्दै जानु मुर्दा हुनु जस्तै हो। जस्तै र हुनुमा फरक हुदोरहेछ। जस्तै: मेरो सास थियो र छ। नभएको कुरा किन हत्या गर्नु? हत्या हुनु भनेको जुन छुनु जस्तै रैछ। मुर्दा हुनु जस्तै थप यता